Cabernet Sauvignon - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
I-Cabernet Sauvignon iyinhlobonhlobo yewayini elibomvu elakhiwe ngokungahambisani phakathi kweCabernet franc ne-Sauvignon blanc. Ihlanganiswa namanye amawayini ahamba phambili kunawo wonke emhlabeni.
Lezi zinhlobonhlobo zazibonakala zenzeke kuma-1700 eBordeaux, lapho zathola ukuthandwa ngenxa yokuphikiswa kwayo kwe-botrytis. Idumela layo lakhula ngo 18th Century, ngenxa yokuphumelela kwesifunda sewayini saseBordeaux esasisebenzisa njengesithako esibalulekile emaxukwini ayo adumile.
Kwavela ezihlukahlukene eziyisishiyagalombili ezitshalwe emhlabeni wonke ngawo-1990, kuya kwezihlobo eziningi ezitshalwe futhi ezidumile ngo-2010.
Ngekhulu le-18 eBordeaux lalivame ukubizwa ngokuthi iPetit Vidure. Kuyaziwa nangokuthi iPetit Cabernet.
Ukukhiqizwa eNingizimu Afrika
Akuqiniseki lapho uChabernet Sauvignon efika eNingizimu Afrika, kodwa kungenzeka ukuthi sekukhona amakhulu amabili eminyaka edlule. UProfesa Abraham Izak Perold waseNyunivesithi yaseStellenbosch ngo-1920 wabhekana njengomlimi okwazi ukukhiqiza iwayini elihle kakhulu futhi ngakho-ke wakhuthaza kakhulu ukukhiqizwa kwawo. Ezihlukahlukene zaqala ukusetshenziswa ekukhiqizeni iwayini elilodwa le-varietal, kodwa kamuva liphinde lisetshenziselwe ukuxuba izinhloso.
I-Cabernet Sauvignon iyinhlobo yewayini elibomvu elitshalwe kakhulu eNingizimu Afrika. Izivini zitholakala kuzo zonke izindawo zokukhiqiza iwayini, kanye nokubalwa kweStellenbosch endaweni enkulu ngaphansi kokukhiqizwa, kulandelwa iPaarl, iSwartland neRobertson.
Inokukhula okunamandla futhi iveza izinkuni ezinzima. Ukukhiqizwa okuphakathi kuzungeze u-6 t / ha kuya ku-12 t / ha.
Amagilebhisi avuthwe ngasekupheleni konyaka, kuze kube sekupheleni kukaMashi.
Izinhlobonhlobo zinezincane, ezithambile, ezizungezile, ezibomvu amajikijolo. Isikhumba ezinzima futhi obukhulu, ngesikhathi inyama niqinile isici aluhlaza ukunambitheka.
Amaqabunga ahlaza okwesibhakabhaka, aphakathi nendawo, ajikelezayo futhi ahlanu-lobed ne-lobes edwengula.
Izinhlobonhlobo zizwela u-oidium ne-mildy isikhutha, kodwa ziphikisana ne-botrytis.
In South Africa, Cabernet Sauvignon has been associated with premium single varietal wines since the 1920s. It is also used in various blends, such as with Cinsaut or Shiraz to soften the tannins, with Pinotage and other varieties to produce a Cape blend, or Merlot, Cabernet franc and so forth to produce a Bordeaux-style blend.
ENingizimu Afrika, iCabernet Sauvignon ihlotshaniswe namawayini we-premium single varietal kusukela ngo-1920. Ibuye isetshenziswe ngezihlanganisi ezihlukahlukene, ezifana neCinsaut noma iShiraz ukunciphisa ama-tannin, ne-Pinotage nezinye izinhlobo ukukhiqiza i-Cape mix, noma i-Merlot, i-Cabernet franc nokunye ukukhiqiza ukuhlanganiswa kwesitayela saseBordeaux.
Kunezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zama-clones akhiqizwa eNingizimu Afrika, okuvela ku-flavour kusuka emajikijolo kuya e-alcohol, ushokoledi, utshani ngisho nophepele oluhlaza. Ngokuvamile, i-clone engaphezu kweyodwa itshalwe ithektare ngalinye ukukhulisa ubunzima bewayini.
Translated by Zodwa Makondo